Забур 113 CARS - Nnwom 113 ASCB
Ao, mo Awurade asomfoɔ, monkamfo no,
monkamfo Awurade din.
2Momma wɔnkamfo Awurade din,
seesei ne daa nyinaa.
3Ɛfiri baabi a owia pue kɔsi faako a ɔkɔtɔ,
ma wɔnkamfo Awurade din.
4Wɔama Awurade so aman nyinaa so,
nʼanimuonyam tra ɔsorosoro.
5Hwan na ɔte sɛ Awurade yɛn Onyankopɔn,
Ɔbaako no a ɔdi ɔhene wɔ ɔsorosoro,
6ɔno na ɔbɔ ne mu ase
hwɛ ɔsorosoro ne asase.
7Ɔma ahiafoɔ so firi mfuturo mu
na ɔpagya onnibie firi nso sie so;
8ɔde wɔn tena mmapɔmma mu,
wɔn nkurɔfoɔ mmapɔmma mu.
9Ɔbɔ obonini atenaseɛ wɔ ne fie
sɛ ɔbaatan a nʼani gyeɛ.
ASCB : Nnwom 113